Iyazika inqola? Amadede kaKhongolose asesinukela sonke - Bayede News
Isithombe: nguQaanita Hunter
Izinkinga zobuholi zikhungethe iqembu. Lokhu kungahle kukapakele nakuHulumeni
Inyanga esikuyo ingemqoka emlandweni wepolitiki yaseNingizimu Afrika. Kukule nyanga ngonyaka we-1994 lapho izinkulungwane zabakuleli zawelisa leli lizwe esikhathini esinzima sobandlululo kanye nengcindezelo. KwaboHlanga nabalingini kuleli, ukuba namandla okuqoka abantu kanjalo nohlobo lukaHulumeni abalamukelayo. Amagama ehlangano nabaholi be-African National Congress (ANC) ayehamba phambili. Lokhu kwabe kusekwa wumlando wale nhlangano ekulweleni inkululeko yaboHlanga. Ngenxa yodumo nokwesekwa ngaboHlanga nabantu nje jikelele i-ANC yanqoba ukhetho kwathi owayengumholi wayo uMnu uMandela waba nguMengameli wokuqala ngaphansi kombuso wedemokhrasi. Kuze kube namuhla leli qembu lisaphethe uHulumeni kuzwelonke ezifundazweni nakomasipala abaningi kuleli.
Kule nyanga kuphela iminyaka engama-27 leli lathola inkululeko noKhongolose waphatha izwe kepha umlando wale nhlangano kawusefani. Iqembu kanjalo nabaholi ababethandwa behlonishwa sekuphenduke undabamlonyeni ngamachilo akhonjwa kubaholi nasemalungwini alo. Kusuka ekuqolweni kwezimali zombuso, ukubulalana kwabaholi ngenxa yezikhundla kanye nokubanga izingqoko ezicoshakala emisebenzini eyabiwa uHulumeni.
Lesi simo sesidale ngisho ukuphuma kwamanye amalungu kuleli qembu ayovula ezinye izinhlangano kanye nokulahlekelwa ngabavoti kwezinye izindawo. Okwakamuva nje ukukhuluma kugqame kulokhu okubukeka njengombango phakathi kwabeseka uMengameli weqembu nezwe, uMnu uRamaphosa kanye nabeseka uNobhala Jikelele weqembu uMnu uMagashule. La maqembuqembu azalwe wudaba lokungaboni ngaso linye kobuholi kanjalo nalabo okumele babe zindlamvuzo phambi kobuholi bukaMnu uZuma. Nakho okwabe kuzalwe yingxabano yalabo ababengafuni uMnu uMbeki ngoba bethi ushishibeza uZuma.
Bukhona ubufakazi bokuthi konke lokhu kuklwebhana sekukapakele nasezinhlakeni zikaHulumeni njengoba sebekhona abasolana phakathi kokunye kokuqhubuluzana kwamalungu ezikhundleni ezimqoka. Okunye okufakazela lokhu wudaba lukaloyo owayeyiMeya yeTheku okaMajola nokhala ngokuthi amacala ‘anamekwa’ ngawo aphekwe zimbangi zakhe athi kazifuni ukubona izinhlelo zakhe zokufukula aboHlanga zisimama. Kunjalo naseNorth West lapho owayenguNdunankulu uMahumapelo ethi wakhishwa hhayi ngoba enze kabi kepha zimbangi ngaphakathi eqenjini.
Kanti bakhona nabasola ukuthi kwezongqongqoshe bashaywa ngesithende nje kwabe kuyiyo inhlese yepolitiki yangaphakathi. Nakomasipala yiso leso abantu bakhala kokuqhubulushwa ezikhundleni ezithile nasemiklamweni ethize kuHulumeni. Kuza ukhetho loHulumeni Bendawo nje kukhona ukulangazelela ukuthi amalungu eqembu angahle ahlukane phakathi uma esehlanganisa uhlu nokungahle kucijise imikhonto ngesikhathi sokhetho. Ngenxa yezibalo eziningi zeqembu kanye nokwesekwa kwalo emiphakathini kuyabonakala ukuthinteka kwemiphakathi uma izinhlangothi eqenjini elibusayo zidudulana.
Bathi ibole ekhanda
Kwenzeka konke lokhu nje leli qembu labe lizibophezele ukuthi eminyakeni emihlanu lizolwela ubunye beqembu. Iqiniso lithi selokhu kwaba khona ukungaboni ngasolinye kwakamuva kubukeka bungahle buyise le nhlangano endaweni enzima. Lokhu kuthinta uRamaphosa noMagashule ngqo nabaphethe izikhundla ezimbili ezimqoka enhlanganweni.
Abanye bathi kwaba yinzondo (phakathi kukaMengameli noNobhala) ngosuku lokuqala mhla bekhethwa. Ngalobu busuku indlu yabe ihlukene phakathi,
indlu yabe ihlukene phakathi, kukhona abathi nguye okumele athathe lesi sikhundla esabe siphethwe nguMnu uGwede Mantashe. Ngakolunye uhlangothi bakhona ababethi lesi sikhundla kwabe kumele sithathwe nguMnu uSenzo Mchunu. Womabili la madoda, uMchunu nomaMagashule abe eyizimpelesi zalabo ababencintisana kwesokuba nguMengameli weqembu okwabe kunguDkt uNkosazana uMaDlamini Zuma owayebelethe uMagashule kanye noMnu uCryil Ramaphosa owayebelethe uMchunu.
Kwaba nemibiko eminingi eyabe ichaza ukuthi ukuqokwa kukaMagashule kwabe kulichashaza ebuholini ‘obuqotho’ bukaRamaphosa. Emachashazeni wabe engeyedwa uMagashule njengoba nanamanje kukhona abasasho njalo ngoMabuza oliSekela Mengameli.
Ukungaboni ngaso linye phakathi kwabeseka uMagashule noRamaphosa kusobala yize bona bobabili bezithiba. Lokhu kungaboni ngaso linye kuzwakala nasezinkulumweni zalaba baholi kanye nalabo ababesekayo. Abanye abaholi kuKhongolose okubalwa owayenguMengameli uMbeki. Kuvele kwabanye bezindaba ukuthi uMbeki wexwayise i-ANC ngobungozi bokuba neHhovisi likaNobhala Jikelele elinezinkinga nathe kumele lokhu kubhekwe ngelibanzi ngoba kungahle kukhinyabeze iqembu. Omunye umholi oqavile kuleli qembu uphawule ngoMagashule nezakhe. Embhalweni oshicilelwe ngabeDaily Maverick , uMnu uJoel Netshitenzhe uthe: “Akubekwe eceleni ukudideka, okuyikhona okunyakazisa amalungu amaningi e-ANC ukuthi uNobhala Jikelele uziqhelelanisile nomhlahlandlela ocatshwe yizikhulu, ezibizwa ngeTop Six, kukhokhasi ye-ANC ePhalamende. Lokhu bekumayelana nokubheka ukuthi kungafakwa yini ePhalamende ukulungela nokungalungeli iHhovisi kukaMvikeli WoMphakathi, ngokombiko wethimba elajutshwa uSomlomo weSishayamthetho Kuzwelonke, othole ubufakazi obubonakalayo ngokungalungeli nanokungaziphathi kahle.”
Uqhubeke wathi ngoMagashule: “Kunezikhathi lapho yinoma yimuphi umholi angaphambuka khona noma asho okulumelayo. Okukhathazayo wukuthi lokhu sekuba ngokulindelekile kuNobhala Jikelele uma ekhuluma nomphakathi ngezindaba ezinzima ezibhekene neqembu, isibonelo, udaba lwamalungu okufanele abuyele eceleni uma ethweswa amacala ngokusemthethweni, iSigungu Esiphezulu Kuzwelonke (NEC) ngoNhlolanja sahambisana neziqondiso, okuyisinqumo esatshelwa umphakathi nguMengameli ekupheleni komhlangano. Yize kunjalo, uNobhala Jikelele ubelokhu ebelesele ethi asikho isinqumo esinjalo esathathwa, ngokwakhe udaba lolu lusengaya emagatsheni. UMgcinimafa Jikelele obehola ithimba ebelibeka iziqondiso kudingeke ukuthi aphikisane nalokhu esidlangalaleni, eqinisekisa okushiwo uMengameli esevala.”
Sisuka kude noLindisa sibambene kuze kube manje
Umthelela ezweni nakubantu
Inkulumo ethi uma izindlovu ezimbili zilwa utshani buyaqothuka icishe ichaze ngalokho okwenzeka ezweni nasemphakathini ngokuklwebhana kwe-ANC. Isithombe esithi leli alinabo ubuholi obunombono ofanayo kuthiwa kwenza abatshalizimali babe manqika. Lokhu kuvela kakhulu uma kukhulunywa ngodaba lomhlaba.
Labo abazibiza ngabeseka uMagashule bamile ekutheni umhlaba awubuye kwaboHlanga ngaphandle kwesinxephezelo ngoba usezandleni zezinjinga zabelungu. Lokhu kungaboni ngasolinye kubukeka kungahle kuqhubeke nokwehlukanisa uKhongolose nokwenza abanye basole uMagashule ngokuhlomisa abathile ukuze bavukele inhlangano ngaphakathi.
Umhlangano we-ANC obubanjiwe unqume ukuthi labo ababhekene namacala kuyomele bahoxe enhlanganweni. Lokhu kuhunyushwe ngabanye njengesinqumo esijijibeza uMagashule njengoba yena nabanye bebhekene namacala amayelana nenkohlakalo. Konke lokhu kubukeka kungahle kujabulise izimbangi zeqembu nezingangena ngenxeba.
Ephawula ngesinqumo sezinsuku ezingama-30 sokuba abanjengoMagashule bahoxe umholi we-Economic Freedom Fighters (EFF) uMalema uthe: “Lesi simo akusiso isimo ongathi uvuka ube uhlasela, kuyizibilini zeqembu. Uma uhlasela iqembu ezibilinini uzoliqumba phansi. Kodwa thina kuyasisebenzela njenge-EFF.”
UMalema uthe lokhu kufanele kwenziwe iSigungu Esiphezulu Kuzwelonke se-ANC noma ingqungquthela ekhethekile. “Uthatha isinqumo somhlangano ukususa unobhala jikelele, kufanele uhambisane nezinhlaka hhayi neqenjana elithile labangcono.”
nguMfo waKwaNomajalimane Apr 2, 2021